Kusawirirana pakati peGreek neTurkey: France iri kutora chikamu! - Tamban RELAY
France yakamisikidza kwenguva pfupi mauto maviri eRafale uye ngarava mbiri dzekumabvazuva kweMedithera pakati pemhirizhonga pakati peGreek neTurkey pamusoro pekubatwa kwegesi, iyo Ministry of the Army of the Army yakazivisa neChina (Nyamavhuvhu 13).
NeChipiri, Ankara akataura kuti yakanga yatumira ngarava zuva rakapfuura kunotsvaga ma hydrocarbons munzvimbo ine zvikamu zviviri muzvitatu zveGreek maritime zone, yakapokana kwemakumi emakore neTurkey. Greece yakabva yaita nekutumira igwa "Tarisa" Mabasa eTurkey, sekureva kweAtene, yambiro kuburikidza nezwi remukuru wayo, Kyriakos Mitsotakis, "Kuti hapana kumutsamwisa kwaenda kusina kupindurwa".
Chirevo chakachengetwa kune vatinyoresa Verenga zvakare Kutangazve kwegakava pakati peGreek neTurkey kumabvazuva kweMedithera
Macron anotuka "kutyora" kwouchangamire hweGreek
Emmanuel Macron akazivisa neChitatu manheru kusimbiswa kwenguva pfupi kwevekumauto eFrance munzvimbo ino uye akadaidzira Greece neTurkey, vese nhengo dzeNATO, kuti vashande pamwe zvakanyanya kuti varerutsane. Musi waChikunguru 23, Musoro weNyika wakashora zvakanyanya "Kuputsa" yehunyanzvi hweGreek neCypriot neTurkey nezvekutsvagisa kwemagetsi egungwa mugungwa.
« [ kuvapo kwemauto [ChiFrench] inovavarira kusimbisa kuzvitarira kwemamiriro ezvinhu uye kusimbisa kubatana kweFrance mukufamba kwakasununguka, kuchengetedzeka kwekufamba muchikepe muMeditera uye kuremekedza mutemo wepasi rose ”, yakataura neyayo Ministry of the Mauto Echisimba.
Iwo maviri Rafale achaita "Nhanho" China neChina muSouda, Krete, uye uchagara ikoko "Mazuva mashoma", yakanangidzira ushumiri. Vakanga vamboendeswa kuCyprus kubva Muvhuro kusvika Chitatu kuita chiitiko. Iyo helikoputa inotakura Kutinhira, iri munzira kuenda kuBeirut kunopa rubatsiro mushure mekuputika kunouraya kwaNyamavhuvhu, yakabatanidzwawo nehusiku hweChitatu kusvika China neveMedigine La Fayette, uyo akange afamba nechikepe kubva kuLarnaca (Kupro) uye kuita chiitiko neGreek Navy.
Kuenderera mberi hurukuro
Mutungamiri weTurkey, Recep Tayyip Erdogan nemusi weChina mangwanani panguva yehurukuro nevatungamiriri vebato ravo kuti achasangana nemutungamiri weGerman Angela Merkel neMutungamiri weEuropean Council Charles Michel masikati.
"Mhinduro kuMabvazuva kweMedithera inopfuura nehurukuro uye kutaurirana", akadaro mutungamiri weTurkey, achiwedzera zvakadaro kuti Ankara haadaro "Hapana chingarega nyika ichityora kodzero dzayo".
Atene inopomera Ankara nekutyora nharaunda yayo nekuita tsvakiridzo yesimba kumaodzanyemba kwechitsuwa cheGreek cheKastellorizo ​​(Meis, muTurkey), asi Turkey inoramba kubvuma kuti iyi dunhu diki iri pedyo nemawere . "Kupa hutongi hwegungwa nekushandisa chitsuwa cheMeis, chiri makiromita maviri kubva kumahombekombe eTurkey uye makiromita mazana mashanu nemakumi mashanu kubva munyikawo Greece, hazvigone kutsanangurwa"VaErdogan vakawedzera kuvakuru vebato ravo.
Isu rezvematongerwo enyika
Kuwanikwa mumakore achangopfuura eminda yakakura yegasi kumabvazuva kweMedithera kwakawedzera nzara yenyika dzakabereka uye kwakawedzera kusawirirana pakati peTurkey neGreek, Ankara kunyanya ichida kuzvimanikidza kumhanya kwemafuta uye kuzvisimbisa sesimba rinotungamira. kumabvazuva kweMedhiya.
"Girisi neTurkey zvagara zvichinetsana muvakidzani, asi kubvira pakakundikana kurwisa Erdogan muna 2016, mamiriro ezvinhu akazoipa zvakanyanya". akatsanangurwa kuna nyika Panagiotis Tsakonas, purofesa wezvehukama nedzimwe nyika kuYunivhesiti yeAthens. Akatarisana nenyika yake nedambudziko rakanyanya rezvehupfumi, mutungamiri weTurkey ari kuyedza kupenya mamiriro ekunze uye kuwedzera hunyanzvi hwake kupfuura miganhu yeTurkey, muSyria, Libya neMedithera.
Chimwe chiratidzo cheichi chishuvo chekukunda: munaNovember 2019, Turkey yakasaina chibvumirano neLibyan National Accord (GAN) hurumende iyo inotora miganhu yepasi pegungwa nekupinda nzvimbo dzakasarudzika dzeGreek neCypriot. SOURCE: https: //www.lemonde.fr/international/article/2020/08/13/tensions-entre-la-grece-et-la-turquie-la-france-envoie-deux-rafale-et-deux- Batiments-de-la-marine-rudziale_6048868_3210.html
Kylie Jenner anogovera kumashure kwechiitiko chakapfurwa kubva mumhanzi weVAP mimhanzi - Vhidhiyo